Nagarik News - मरेलाई क्यानरुनको शुभकामना फाप्ला?
मरेलाई क्यानरुनको शुभकामना फाप्ला?
04 Jul 2013 | 07:58am
लन्डन रोयटर्स – बेलायती प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले आफूमाथि लागेको 'कर्स अफ क्यामरुन' को बेवास्था गर्दै विम्बल्डन क्वार्टरफाइनलका लागि एन्डी मरेलाई शुभकामना दिएका छन्। बेलायती खेलस्टारलाई क्यामरुनको शुभकामना वा उपस्थिति नफाप्ने आरोप छ। गत वर्ष विम्बल्डनको फाइनलमा क्यामरुनले सक्रिय समर्थन जनाएका बेला मरेले पराजय भोगेका थिए।
यसैगरी लन्डन ओलम्पिकमा देशले पदक आशा गरेका खेल आयोजना स्थलमा उनी पुग्दा अधिकांश नतिजा बेलायती खेलाडीको विपक्षमा आएका थिए, जसलाई जोड्दै क्यामरुन बेलायती खेलकुदका लागि अफाप भएको आरोप लगाइएको थियो।
बेलायतकी शीर्ष महिला खेलाडी १९ वर्षे लाउरा रोब्सन सोमबार विम्बल्डनको चौथो चरणबाट बाहिरिन्। त्यसअघि क्यामरुनले काजकस्तानबाट रोब्सनलाई शुभकामना दिँदै टि्वट गरेका थिए, 'विम्बल्डनको चौथो चरणमा पुगेकी लाउरा रोब्सनलाई शुभकामना।'
क्यामरुनको शुभकामना पाएपछि असफलता हात पार्नेमा इङल्यान्डको रग्बी टोली पनि हो। टोलीले दक्षिण अफ्रिकासँग २००७ को विश्वकप फाइनलमा १५–६ को हार बेहोरेको थियो। यसैगरी लेविस ह्यामिल्टनले पनि फर्मुला वान ड्राइभरहरूको च्याम्पियनसिप एक अंकका कारण गुमाउनुपरेको थियो।
कर्स अफ क्यामरुनको चर्चाले बेलायत ताते पनि प्रधानमन्त्री बुधबार फेरि खेलाडीलाई शुभकामना दिन टि्वटरमा फर्केका छन्। प्रधानमन्त्रीले बेलायती नम्बर एक खेलाडी मरेलाई स्पेनका फर्नान्डो भर्डास्कोविरुद्धको खेलका लागि शुभकामना दिए। 'आकाश अहिले केही खैरो छ। आशा गरांै, एन्डी मरेको जित लागि त्यो खुल्नेछ। एन्डीलाई विम्बल्डन जित्न शुभकामना छ,' क्यामरुनले लेखेका छन्।
क्यामरुनका एक प्रवक्ताले बेलायती खेलाडीलाई समर्थन गर्ने अभियान रोक्ने प्रधानमन्त्रीको कुनै योजना नरहेको प्रस्ट पारेका छन्। 'पछिल्लो केही वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले शुभकामना दिएकाको नतिजामा हारभन्दा जित बढी छ,' ती प्रवक्ताले भने।